Ufuna ukuqapha okufanelekile kwe-anesthesia? Izinzwa ze-EEG ezilahlayo nazo zidinga ukuba lusizo kakhulu ~ ifektri nabakhiqizi | I-Med-link
Izinto Ezisetshenziswayo Neonatal
Izinto ezisetshenziswayo zokubulala izinzwa
SpO2 adaptha Izintambo
Alahlwayo SpO2 Izinzwa
Qondanisa-Xhuma izintambo ze-ECG
Izintambo ze-ECG Trunk
Alahlwayo ECG Leadwires
Ama-Leadwires we-ECG Telemetry
Qondanisa-Xhuma izintambo ze-EKG
Izintambo ze-EKG Trunk
Bheka / EMG
Alahlwayo izinzwa inzwa
Izingxobo ze-NIBP ezingasetshenziswa kabusha
Alahlwayo NIBP Cuffs
IBP adaptha Izintambo
Ama-Transducers alahlwayo e-IBP
IBP ukumnika Izikhwama
Amaphilisi Okushisa Okuphinda Usebenzeke
Alahlwayo lokushisa uphenyo
Ama-electrode angathathi hlangothi alahlwayo
Izesekeli zokuqapha ze-CO2
Ufuna ukuqapha okufanelekile kwe-anesthesia? Izinzwa ze-EEG ezilahlayo nazo zidinga ukuba lusizo kakhulu ~
Behind the universal ne...
2021CMEF Spring Exhibit...
Falls are actually the ...
Ukhiye we-anesthesia ne-ICU ukuqapha ukujula kwe-anesthesia. Singakuthola kanjani ukuqapha okufanelekile kwe-anesthesia? Ngaphezu kwesidingo se-anesthesiologist esinolwazi, umhloli wokujula we-anesthesiologist kanye nenzwa ye-EEG engasetshenziswanga esetshenziswayo ne-anesthesia monitor nayo kufanele ibe namandla kakhulu.
Izinzwa ze-EEG ezingasetshenziswanga ezilahlwayo
Siyazi ukuthi ukujula kwe-anesthesia yizinga lapho umzimba uvinjelwa khona yinhlanganisela ye-anesthesia kanye nokukhuthaza emzimbeni. Njengoba ukuqina kwe-anesthesia nokukhuthaza kukhula futhi kuncipha, ukujula kwe-anesthesia kuyashintsha ngokufanayo.
Ukuqapha ukujula kwe-Anesthesia bekulokhu kuyinkinga yezazi zokubulala izinzwa. Ukujula kakhulu noma kujule kakhulu kuzodala ukulimala emzimbeni noma engqondweni ezigulini. Ukugcina ukujula okulungile kwe-anesthesia kubalulekile ukuqinisekisa ukuphepha kwesiguli nokunikeza izimo ezinhle zokuhlinzwa.
Kubikwa ukuthi i-BIS inokuhlobana okuhle nokuhlungwa kwezidakamizwa eziningi zokubulala izinzwa, ngakho-ke ukuqondiswa komthamo wezidakamizwa zokubulala izinzwa, ukusetshenziswa kokuqapha kwe-BIS, ngokusho kwemiphumela yokuqapha ukuqondisa ukusetshenziswa kwezidakamizwa zokubulala izinzwa, ezingalondoloza kangcono ukujula kwe-anesthesia futhi udlale umphumela omuhle wokubulala izinzwa.
Ngokuthuthukiswa kobuchwepheshe bokuqapha i-EEG eminyakeni yamuva nje, i-BIS (bispectralindex) isibe yindlela eyaziwayo yokuqapha kangcono isimo sokusebenza kwecortex cortex nezinguquko, futhi ingasetshenziswa njengendlela ejwayelekile futhi ethembekile yokuqapha ukujula kwe-anesthesia ekwenziweni komtholampilo.
I-BIS inani lezibalo elisuselwa kwirekhodi le-EEG elikabili-imvamisa lokukhishwa kwezidakamizwa ezahlukahlukene zokubulala izinzwa kusampula enkulu. Le datha itholwe ikakhulukazi kwisampula enkulu yezifundo ezithola izidakamizwa ezimbili zokubulala izinzwa ezifakwe kumarekhodi e-EEG aphindwe kabili, futhi isimo sokukwazi, izinga lokuhlala phansi, nayo yonke i-EEG eqoshiwe yakha i-database. Ngemuva kwalokho, ngokuya nge-electroencephalogram (EEG) frequency spectrum kanye ne-spectrum yamandla, inani lemininingwane elihlanganisiwe liyalingana elitholwe ekuhlaziyweni okungagqamile kwesigaba ne-harmonics kuyangezwa.
I-BIS ukuphela kwenkomba yokuqapha i-anesthesia sedation evunyelwe yi-US FDA, engahlola isimo se-cerebral cortical function futhi ishintshe kangcono, inokuzwela okuthile ukubikezela ukunyakaza komzimba, ukuqwashisa ngokuhlinzwa, nokulahleka nokubuyiselwa kokuqonda, futhi kunganciphisa izidakamizwa zokubulala izinzwa Isikali indlela enembe ngokwedlulele yokwahlulela izinga lokuthambisa nokuqapha ukujula kwe-anesthesia yi-EEG
Inkomba yokuqapha ye-BIS
Inani le-BIS i-100, isimo sokuvuka; Inani le-BIS 0, akukho msebenzi we-EEG (i-cerebral cortex inhibition), (i-cerebral cortex inhibition). Inani le-BIS ngokuvamile libhekwa njengokujwayelekile phakathi kuka-85 no-100. Ama-65 ~ 85 athambisa umzimba; Ama-40 ~ 65 yi-anesthesia. <40 Kwangathi kungabakhona ukucindezelwa kokuqhuma.
Ukuze kubhekwe ukujula okunembile nokufanele kwe-anesthesia ngezikhathi ezibucayi, inzwa ye-eeg elahlwayo engasetshenziswanga esetshenziswa ngokuqapha ukujula kwe-anesthesia nayo kufanele ibe wusizo, ukuze inani lezinkomba kunoma isiphi isimo likhonjiswe ngokunembile.
IShenzhen Med-link Electronics Tech Co, Ltd (ngemuva kwalokhu ebizwa ngeMed-linket) ineminyaka engu-15 yesipiliyoni sokucwaninga emihlanganweni yezintambo zezokwelapha. Ngemuva kweminyaka yokuqinisekiswa komtholampilo, ngokuzimela sithuthukise inzwa ye-EEG engalawuleki, ehambelana nama-monestia we-anesthesia wokujula anama-module we-BIS anjengeMindray nePhilips. Isilinganiso siyazwela, inani linembile, futhi ikhono lokulwa nokuphazamiseka liqinile. Kusiza udokotela obulala izinzwa ukuthi aqaphe eduze isiguli esingaqulekile futhi anikeze izindlela zokulawula nokwelashwa okuhambisana nesikhathi ngokwesimo sokuqapha.
Khetha inzwa ye-EEG ye-Med-linket engeyona eyemvelo, khomba ikhwalithi yobuchwepheshe be-Med-linket, iminyaka eyi-15 yokulima kakhulu, phansi, ngezinto ezingabizi kakhulu zekhebula lezokwelapha, siza imikhiqizo yasekhaya ifohle.
* Isimemezelo: Zonke izimpawu zokuhweba ezibhalisiwe, amagama, amamodeli, njll. Okuboniswe kokuqukethwe okungenhla kungumnikazi wokuqala noma umkhiqizi wangempela. Lo mbhalo usetshenziselwa ukukhombisa ukuhambisana kwemikhiqizo yeMed-Linket. Ayikho enye inhloso! Konke okungenhla. imininingwane ingeyenkomba kuphela, futhi akufanele isetshenziswe njengesiqondiso somsebenzi wezikhungo zezokwelapha noma amayunithi ahlobene. Ngaphandle kwalokho, noma yimiphi imiphumela edalwe yile nkampani ayihlangene nakancane nale nkampani.
Previous: IPhilips MX40 Ihambisana ne-ECG Telemetry Leadwires ET035C5I
Olandelayo: I-D-YS Inzwa esebenzisekayo esebenza kabusha ye-Multi-site SPO2
Isikhathi Iposi: Dec-06-2019
Shenzhen Med-isixhumanisi Electronics Tech Co., Ltd.
Ucingo: (86) 400-058-0755